ပါကစ္စတန်ရေတပ်က မူးယစ်ဆေးဝါး ကီလိုဂရမ် ၅ဝဝဝ ဖမ်းဆီးရမိ - Yangon Media Group
ပါကစ္စတန်ရေတပ်က မူးယစ်ဆေးဝါး ကီလိုဂရမ် ၅ဝဝဝ ဖမ်းဆီးရမိ
ရဝါပင်ဒီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈
ပါကစ္စတန်ရေတပ်က ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကမ်း ခြေ၌ မူးယစ်ဆေးဝါး ကီလိုဂရမ် ၅ဝဝဝနှင့် အခြားမှောင်ခို မူးယစ် ဆေးဝါးများကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းက ဖေ ဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ဖော်ပြလိုက် သည်။ စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါကစ္စတန် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ASLAT သင်္ဘောက တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပါကစ္စတန်ရေတပ် လူထုဆက်သွယ် ရေးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ASLAT သင်္ဘောသည် သံသယမကင်း သော သင်္ဘောတစ်စီးကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ရာ အဆိုပါသင်္ဘောမှ ဆေး ခြောက်ကီလိုဂရမ် ၅ဝဝဝကို ဖမ်း ဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်ကဆိုသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် သံသယရှိသူများအား ပါကစ္စတန်ရေကြောင်းသွားလာမှု လုံခြုံရေးအေဂျင်စီသို့ လွှဲပြောင်း ပေးကာ ဥပဒေအရအရေးယူသွား မည်ဟု ကြေညာချက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ရေတပ်သင်္ဘော ASLAT မှာ နိုင်ငံစုံ ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးတပ် 150 အဖွဲ့၌ ပါဝင်ပြီး Operation Enduring Freedom စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်နေချိန် ဖြစ်သည်။ ဤ Taask Foree-150 ရေကြောင်းလုံခြုံရေး နှင့် အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးရေး၊ တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကို ဖမ်းဆီး ရေးများ လုပ်ဆောင်ရသည်။ ပါကစ္စတန်ရေတပ်သင်္ဘော သည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်း၌ ကင်းလှည့်စဉ် မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရမှုမှာ အရေးပါကြောင်း ပါကစ္စတန်ရေတပ်က ပြောကြား လိုက်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး စစ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဒူတာတေကို နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုခုံရုံး စတင်စစ်ဆေး
ထိုင်ဝမ်တွင် နောက်ဆက်တွဲ ငလျင် ငယ်များ ဆက်လက် လှုပ်ခတ်၊ သေဆုံးသူ ၁ဝ ဦးအထိ ရှိလာ
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဂျော့ဂ်ျအိပ်ခ်ျဒဗလျူဘုရှ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တတိယမြောက်စွပ်စွဲခံရသူဖြ?
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် လယ်ယာ ဝန်ဆောင်မှုအသင်း စတင် ဖွဲ့စည်း
မန္တလေးမြို့သစ်ရှိ မြေကွက်များ အရောင်းအဝယ် ပြန်လည် လှုပ်ရှားလာပြီး ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များတွ?
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆန္ဒနယ်များ ပြန်လည် သတ်မှတ်မည့် အစီအစဉ်ကို မလေးရှားပြည်သူများ ကန့်ကွက် ဆန္ဒြ??